Ngo ukusebenza kwe-ekwakhiweni kwezakhiwo, kanye zonke izinhlobo zokuxhumana Njalo sibhekana uma isimo sezulu sisibi. Ukuze zivikeleke contact umswakama futhi ngaphambi kwesikhathi ekubhujisweni esetshenziswa ungangenisi amanzi. Izinhlobonhlobo lezi zinto, kunezindlela eziningi. Kulokhu, omunye ethandwa kakhulu iyona asphalt ze-mastic. Leli thuluzi Kulula ukusebenzisa futhi engabizi. Ngaphambi ukwelashwa kubalulekile ukwenza izibalo ezifanele futhi ukuthola ngqo ukusetshenziswa ibitume mastic ku 1 m2 ungangenisi amanzi. Lokhu kuzovumela ukusebenza njengoba kahle ngangokunokwenzeka futhi ukugwema ekuthengeni izinto ezingadingekile.
Usebenzise le ethandwa ungangenisi amanzi impahla kungenzeka ukwelapha ezihlukahlukene timphawu tesakhiwo kwezakhiwo kanjalo nezinhlaka. Ngokuvamile, i-asphalt mastic iye yasetshenziswa ukugeza izingxenye komhlaba kwesisekelo noma ezindlini. Libuye libe yindlela esetshenziselwa nokuvikela izindlu ezinophahla oluyisicaba. Sebenzisa i-mastic kanye nokuvikela ezindlini zewayini singangeni komhlaba. Kulokhu, ukucutshungulwa kungaba kwenziwe kokubili ngaphandle nangaphakathi. Ukuvikelwa ngempumelelo kakhulu kusukela ukusetshenziswa kwale nto zingenziwa ngoba izingxenye komhlaba izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba amafomu ezincane lathumela (gazebos, senhliziyo, amaslayidi zezingane, nokunye. D.). Ukuphela engezansi zezingongolo kocingo nakho kaningi aphathwe ncamashi le nto.
Ngezinye izikhathi zisebenzisa i-mastic ngoba gluing imidweshu roll ungangenisi amanzi izinto ezindaweni ezahlukene. Cosi, isibonelo, uphahla yokuqedela ne ukufulela wazizwa noma izisekelo. Ngokuvamile i-mastic futhi esetshenziselwa amapayipi ukucutshungulwa zokuxhumana kanye nemithombo.
ukusetshenziswa Bitumastic by 1 m2 ungangenisi amanzi kuncike ngokuyinhloko ezihlukahlukene zalo. Lokhu kwaziswa inhlanganisela organic compounds banezimfanelo izakhiwo cementitious. Bitumastic kungenziwa labizwa by criteria eziningana. Ababonakali ngezikhundla, isibonelo, emakhazeni nasekuhambeni-hot ezahlukeneyo zalo. Esimeni sesibili ngaphambi kokufaka sealant Incibilikile emgqonyeni. samuntu Cold kusho ekuqaleni has a ukungaguquguquki uketshezi.
Ngaphezu kwalokho, sealant kuyinto ngomhlangano noma ezimbili-ngxenye. Inketho yokuqala ingasetshenziswa ngokushesha emva kokuthenga. Two-ingxenye mastic aqukethe amathuluzi amabili ahlukene exutshwa ngaphambi kokusetshenziswa. Ngu uhlobo lezisekelo lezo zimali ihlukaniswa phezu iraba (nokunwebeka), uwoyela polymer ezivamile.
ukusetshenziswa Bitumastic kuncike ukungaguquguquki
Yiqiniso, lo mkhulu indaba, ayanda ukusetshenziswa. Yazi indlela ngqo mastic ezidingekayo ukuze kusebenziswe 1 m 2 ebusweni, omunye angafunda uma yokusetshenziswa. Lokhu abakhiqizi izinga ucacise saziso. Ukusetshenziswa kwe-mastic ashisayo ngokuvamile esingaphansi abandayo. Iqiniso ukuthi into evuthayo encibilikisiwe uwela kwamanzi njengoba ngqo ngangokunokwenzeka, ingeyona izindunduma futhi imigodi. Ngaphezu kwalokho, i-mastic iye ashisayo cishe akukho ukuncipha. Ngenxa yalokhu kanye ukusetshenziswa encishisiwe. Ngo abandayo consistence mastic ngokuvamile viscous kunalaba encibilikisiwe. Ngakho-ke, ukwelashwa surface kubalulekile ukuchitha impela eningi.
Flow rate kuye isibalo izingqimba
It ihlanganiswa ne isisekelo yesikhathi esisodwa noma flat ophahleni mastic elamukelekile Ngokuvamile akunjalo ngelithi. Ngakho-ke, ubuso ziphathwe le nto kaningi 2-3 ungqimba. Lokhu kukuvumela ukuba ugweme ngokuphelele ukuxhumana nomuntu umswakama fluff ebusweni. ukusetshenziswa Bitumastic by 1 m2 ungangenisi amanzi nomkhiqizi ngokuvamile icacisa ungqimba eyodwa kuphela. Ngenxa yalokho, kumelwe imiyalo etholakalayo figure kulesi sibalo iphindwe 2 noma 3.
Ukudla okuqinile futhi embhedeni ukushuba
mastic Cold, ngokungafani ashisayo, ngokuvamile inika ukuncipha enamandla kakhulu. Inani lamanje impahla phezu iphathwa ngemva ukuhwamuka we izinto eziwuketshezi ngokuthi zinsalela ezomile. Lesi sibalo e tinhlobo letehlukene ayinhlama azifani futhi kungaba 20-70%. Ngakho, izinto nge ezisalayo owomileyo ube yiziphethu 20% okunikezwa cishe kathathu ngaphezu kwamaminithi nge inkomba kusho u-70%. Ngakho, ayanda inombolo, kusheshe futhi kube lula ukwenza umsebenzi.
Flow rate kuye indlela kwesicelo
Sebenza nge-asphalt mastic Kusolwa ezingeni lokushisa -10 kuya +50 ° C. Ngaphambi ukusebenzisa, indaba kufanele zixutshwe kahle. I-mastic iyasetshenziswa kwamanzi ngokuvumelana ezihlukahlukene nge ibhulashi, sprayer, roller noma spatula. Kulo mBhalo ngokuvamile ungqimba etholwe smooth xaxa. Futhi ngakho-ke, ukusetshenziswa ibitume mastic ku 1 m2 ungangenisi amanzi encishisiwe. inani lemali wachitha kungabuye encishisiwe uma usebenzisa ibhodlela spray. Kulokhu-ke kulula ulapha nge omkhulu ngokunembile izinto.
Isilinganiso ukusetshenziswa izibalo
Ukuze ungqimba isicelo ngamamilimitha ezimbili kudinga amakhilogremu cishe emithathu nengxenye kwe-mastic per imitha square ku okuseleyo omile 1 mm - 1.2 kg. Ekwelapheni uphahla ngokuvamile sisetshenziswa ungqimba impahla 3-4. Ngakho-ke ukusetshenziswa bitumastic by 1 m2 we ungangenisi amanzi ophahleni lande laba ngu-5.3 kg / m 2. Banamathela phezu ukufulela kwizwe elilodwa ungqimba sivame akukho kuka 250-800 amagremu ejenti ngalinye 1 m2. Iqiniso lokuthi sploshnyakom akulesi cala is hhayi ngokuvamile sisetshenziswa.
ukusetshenziswa Bitumastic by 1 m2 ungangenisi amanzi tube uqobo esingaphansi kwesigamu kilogram. Kulokhu, amafutha avame ukusetshenziswa uhlobo impahla. I-mastic iyasetshenziswa phezu amashubhu 1-2 izingqimba. Kulo mBhalo, ukusetshenziswa Yiqiniso, kuzokhuphula mayelana 2 izikhathi ukufinyelela 2-3 kg.
Yini kunezinye izici ezingase zinqume
Inani ukucutshungulwa adingekayo ebusweni mastic kuncike kuhlanganise ezitshalweni zohlobo yokugcina. Lapho ungangenisi amanzi ukhonkolo, njengoba okubalulekile ukungena nakwamanye amazwe kakhulu, kudinga izimali edlula smearing kwezinkuni. Iqiniso liwukuthi kuleli cala ebusweni mastic nje ubamba. Umuthi Ubuye ikhule ezimbotsheni, kodwa ezincane hhayi inkulu kakhulu ngobuningi. ukusetshenziswa Bitumastic by 1 m2 kahle ungangenisi amanzi ngokhonkolo izindandatho, isibonelo, kuyoba kukhulu kune okwesikhathi Monolithic base izindlu tape (3 kg). Kuyefana nasendleleni izisekelo, kuqoqwa amapuleti. Iqiniso liwukuthi kuleli cala impahla amunca amalunga omzimba.
Ngaphezu kwalokho, inani ejenti wachitha kuxhomeke ekutheni ebusweni iphathwa - ngokumile noma ngokuvundlile. Ngakho, ukusetshenziswa ibitume mastic ku 1 m2 ungangenisi amanzi phansi kuyoba cishe 700-800 g at kodonga kuzothatha kg ejenti okungenani 1-2 lapho isicelo isendlalelo esisodwa.
Indlela ukunciphisa ukusetshenziswa kwe-mastic
Ukugcina izindlela kwento okufanele aphathwe kungenzeka lokuqala primed. Ngokuvamile ukusetshenziselwa lokhu primer njongo. Ngokuvamile ibekwa camera nge surface usebenzisa ibhulashi noma roller. Priming wenziwa lokhu kusho ngokuvamile isendlalelo esisodwa. uDries Primer ngaphakathi kwamahora ambalwa.
Ngaphezu kwalokho, ukuze banciphise ukusetshenziswa ibitume mastic ku 1 m2 nokuvikela egumbini elingaphansi noma ophahleni, kufanele ukulungiselela ngokucophelela ebusweni. I encane kuyoba imifantu futhi chips, eshibhile the ungangenisi amanzi izindleko.
mastic Cold kuyadingeka ukuze uhlanganise kahle ngaphambi kokusetshenziswa. Wambozwa evele mpo yenziwa kusukela phezulu kuya phansi. Uma wenza okuphambene, i-mastic ukusetshenziswa ukwanda. Futhi ukusebenza uqobo, kulokhu-ke kuyoba nzima kakhulu ukuba afeze ngenxa ehle okuholela. Ngaphambi isicelo ka kusendlalelo ngasinye okwalandela kumele ulinde omiswe ephelele kulowo odlule. Hlola ukulungela ebusweni wambozwa elula entsha. Ukuze wenze lokhu, kudingeka uthinte kuso ngomunwe wakho. Uma ingakwenzi lokho unamathele, ungqimba olandelayo bese singasebenza.
Zifudumele okugeza ophahleni: Khetha indlela
Yikuphi kushimula kungcono ukuba okugeza? Indlela yokwenza kushimula okwesikhathi okugeza ngokusebenzisa ophahleni? Ukufaka ngefasitele okwesikhathi okugeza
Eliphezulu kubhayela e Lugansk futhi ikamelo lokubhalela yesimanje
Yini impahla kungcono ukwenza isinyathelo zompheme
Abaluphahleka olungaphambili lwesonto: izinto nobuchwepheshe. Olungaphambili lwesonto usimende imisebenzi yangaphandle
Indlela iyadluthula inhlanzi, noma iresiphi ekahle ubhiya Ungadla
Kungani dream of a inyoka emanzini? Kusho ukuthini uma nguphoyizeni wezinyoka emanzini ephusheni?
Flag eSt George sika: umsuka, umlando
Kuyini imfucuza zichichima ngoba okugeza nokuthi ukukhetha kwesokudla